DOWNLOAD MOVAVI VIDEO CONVERTER MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke kọmputa na kọmpụta na-asụgharị PC mgbe ọ bụla ka ị ghara ịhapụ ngwaọrụ ahụ. Iji belata ọnụego nke ọkụ ọkụ, e nwere ụzọ atọ n'otu oge na Windows, na ịkwa ụda bụ otu n'ime ha. N'agbanyeghị na ọ dị mma, ọ bụghị onye ọrụ ọ bụla chọrọ ya. Ọzọ, anyị ga-atụle ụzọ abụọ ị ga-esi gbanyụọ usoro a na otu esi ewepu ntụgharị nke nnwere onwe dị ka ihe ọzọ iji mechie mmechi.
Gbanyụọ Hibernation na Windows 10
Ná mmalite, e ji ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ egwu egwu dị ka ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ na-ere ọkụ. Nke a na-eme ka batrị na-adịte aka karịa ma ọ bụrụ "Nrọ". Ma n'ọnọdụ ufodu, ịkwa ụra na-eme ihe nhụsianya karịa ezi.
Karịsịa, o siri ike adịghị akwadoro ịgụnye ndị nwere SSD arụnyere na diski ike. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na n'oge ezumike nká, a na-echekwa oge dum dị ka faịlụ na ụgbọala, na maka SSD, usoro mgbatị na-adịgide adịgide na-akụda mmụọ ma belata ndụ ọrụ. Nkeji nke abụọ bụ mkpa ịnyefe gigabytes ole na ole maka faịlụ mkpuchi, nke dị anya site na onye ọrụ ọ bụla. Nke atọ, ọnọdụ a anaghị adị iche na ọsọ nke ọrụ ya, ebe ọ bụ na a na-edekọ oge niile echekwara na nchekwa ọrụ. Na "Ụra"Dịka ọmụmaatụ, echekwara data na RAM, nke na-eme ka kọmputa malite ngwa ngwa. N'ikpeazụ, ọ dị mma ịchọrọ na maka desktọọpụ PC, ikpo ọkụ bụ ihe efu.
Na kọmputa ụfọdụ, a ga-enyere ya aka ma ọ bụrụ na bọtịnụ dakọtara adịghị na menu "Malite" mgbe ị na-ahọrọ ụdị igbanyụ igwe. Ụzọ kachasị mfe ịchọta bụ ma enwere ike ịme mkpuchi na ole ohere ọ na-ewe na PC site na ịga na folda ahụ C: Windows ma hụ ma faịlụ ahụ dị "Hiberfil.sys" nwere ohere edebere na disk diski iji chekwaa nnọkọ ahụ.
A pụghị ịhụ faịlụ a naanị ma ọ bụrụ na egosiputa faịlụ na nchekwa dị na ya. Ị nwere ike ịchọpụta otu esi eme nke a site na isoro njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Gosipụta faịlụ na nchekwa na Windows 10
Ọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ ị ga-emesị jiri ọnọdụ mkpuchi, ma achọghị ka laptọọpụ banye na ya n'onwe ya, dịka ọmụmaatụ, mgbe oge ezighi ezi na nkeji ole na ole ma ọ bụ mgbe ị mechiri mkpuchi, mee usoro ntọala ndị a.
Meghee "Ogwe njikwa" site "Malite".
Tọọ ụdị echiche ahụ "Akara / obere akara ngosi" ma gaa na ngalaba "Enyemaka Ike".
Pịa na njikọ "Ịtọlite ​​Atụmatụ Ike" na-esote ọkwa nke arụ ọrụ na Windows ugbu a.
Na windo pịa njikọ ahụ "Gbanwee ntọala ikike dị elu".
A windo mepee na nhọrọ ebe ị gbasaa taabụ "Nrọ" ma chọta ihe "Ịme mkpuchi mgbe" - ọ dịkwa mkpa itinye ya.
Pịa na "Uru"ịgbanwe oge.
Oge ahọrọ na nkeji, ma gbanyụọ mkpuchi, tinye nọmba ahụ «0» - mgbe ahụ a ga - ewere ya na enwere nkwarụ. Ọ na-anọgide na-pịa "OK"iji chekwaa mgbanwe.
Dị ka ị ghọtara, mode n'onwe ya ga-anọgide na usoro - faịlụ ahụ nwere ohere echekwara na diski ahụ ga-anọgide, kọmputa ahụ agaghị abanye n'ime mkpuchi ruo mgbe ị debegharịrị oge oge achọrọ iji gbanwee. Ọzọ, anyị ga-atụle otú ị ga-esi gbanyụọ ya kpamkpam.
Dị mfe ma dị irè n'ọtụtụ ọnọdụ, nhọrọ bụ ịbanye iwu pụrụ iche na njikwa.
Kpọọ "Iwu iwu"site na ịpị aha a na "Malite"ma mepee ya.
Tinye otuikecfg -hwee pịa Tinye.
Ọ bụrụ na ị hụbeghị ozi ọ bụla, ma enwere akara ọhụrụ maka ịbanye iwu, mgbe ahụ, ihe niile gara nke ọma.
Njikwa "Hiberfil.sys" nke C: Windows ọ ga-apụ n'anya.
Usoro 2: Ndenye
Mgbe maka otu ihe mere ụzọ mbụ ji bụrụ ihe na-ekwesịghị ekwesị, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnweta ọzọ. N'ọnọdụ anyị, ha ghọrọ Editor Editor.
Mepee menu "Malite" ma malite ide "Registry Editor" enweghị nzacha.
Fanye ụzọ n'ime ebe nkesaHKLM System CurrentControlSet Controlwee pịa Tinye.
Ngalaba ndekọ na-emepe, ebe anyị na-achọ nchekwa na aka ekpe. "Ike" ma tinye ya na ntinye aka ekpe (etinyela).
N'akụkụ aka nri nke windo anyị na-ahụ oke "HibernateEnabled" ma mepee ya na igodo abụọ nke bọtịnụ òké aka ekpe. N'ọhịa "Uru" dee «0»wee tinye mgbanwe ahụ na bọtịnụ ahụ "OK".
Ugbu a, dịka anyị nwere ike ịhụ, faịlụ ahụ "Hiberfil.sys"bụ onye na-ahụ maka ọrụ mkpuchi ahụ, kwụsịrị na folda ahụ ebe anyị hụrụ ya ná mmalite nke isiokwu ahụ.
Site na ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ụzọ abụọ ahụ a chọrọ, ị ga-agbanyụ ọkụ ọkụ ozugbo, na-enweghị ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na n'ọdịnihu, ị gaghị ewepu ohere ị ga-esi jiri ọnọdụ a ọzọ, chekwaa ihe edokọbara ihe na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Hụkwa: Na-akwado ma na-ahazi hibernation na Windows 10